बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ प्रतिशतले घट्यो
रासस प्रकाशित: २०७४-१२-५ गते | 1280 पटक हेरिएको
काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
यस वर्षको असार मसान्तमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १७ करोड रहेकामा माघ मसान्तमा २५.७ प्रतिशतले कमी आई रु एक खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड पुगेको हो । माघ मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.७ प्रतिशत छ ।
उता राष्ट्र बैंकमा भने विनिमय सञ्चिति एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको असार मसान्तको रु नौ खर्ब २७ अर्ब २७ करोडको तुलनामा माघ मसान्तमा रु नौ खर्ब ३६ अर्ब २१ करोड पुगेको हो ।
यस वर्षको असार मसान्तको रु १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तमा २.८ प्रतिशतले कमी आई रु १० खर्ब ४९ अर्ब २० करोड पुगेको छ ।
चालू आवको सात महिनामा चालू खाता घाटा चुलिएर रु एक खर्ब ४१ अर्ब छ करोड पुगेको छ । आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उच्च भएकाले चालू खातामा चाप परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु १० अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु ३६ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर यस अवधिमा रु १८ अर्ब २८ करोडले घाटामा छ ।
यस अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर रु १० अर्ब ६४ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह रु १४ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर रु नौ अर्ब २५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु सात अर्ब ६० करोड थियो ।
यस सात महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रु २६ अर्ब ४७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट रु १७ अर्ब ९५ करोडले बचत रहेको थियो ।
सरकारी खर्च यस अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च रु चार खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु तीन खर्ब १३ अर्ब ३० करोड थियो ।
यस अवधिमा चालू खर्च रु तीन खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो ।
त्यसैगरी यस अवधिमा पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशतले बढेर रु ६० अर्ब आठ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च रु ४६ अर्ब ९४ करोड थियो । सरकारी राजस्व यस अवधिमा नेपाल सरकारको कूल राजस्व संलन १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन तीन ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ६५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब १९ अर्ब १५ करोड पुगेको थियो । सरकारको राजस्व संकलन उच्च भन्सार शुल्क सम्बन्धित आयातसँग संवेदनशील रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सांसद बन्न मरिहत्ते गर्ने नेता वामदेव, चाले यस्ताे खतरनाक कदम, प्रचण्डलार्इ नै पारे यस्ताे जालमा!
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक सांसद रौनियारसहित यी ३ सांसदले मारे यस्ताे संसदीय विकास समितिमा बाजी!
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र रहस्यमय राजनीतिक भ्रमणमा, सत्ता पल्टाउन खेल्दैछन् यस्ताे खेल!
कञ्चनपुर हत्या प्रकरण : निलम्बित एसपीकाे प्रहरीले थुत्याे चार वटा सीम, अाखिर काे सँग कुरा गरेका थिए, खुल्याे यस्ताे सनसनीपूर्ण रहस्य!
ओली सरकारको यो कार्य विरुद्ध नेकपाकै सांसदको आक्रोस्, यसरी खनिइन् कोमल वली सरकारविरुद्ध
योगेश भट्टराईको फ्री किकमा आेली किप्पर बन्दा फुत्कियो संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति
'ओली सरकारको चमत्कार : महंगी र बलात्कार'
पेट्रोलको कोटा प्रणाली हटाइयो, पम्पमा लाइन उस्तै
काठमाडौं । इन्धन आपुर्तिमा समस्या भएसँगै लगाइएको कोटा सिस्टम सरकारले हटाएको छ । इन्घन ढुवानीकर्ताले ढुवानी ठप्प पारेपछि इन्धनको अभाव हुने आकंलन सहित सरकारले पेट्रोलमा कोटा प्र..
यी स्थानमा खुल्दै छन् सुपथ मुल्य पसल
काठमाडौं । सरकारले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका लागि सुपथ मुल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । आगामी १२ असोज देखि सुपथ मुल्य पसल सञ्चालनमा आउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्..
पेट्रोल पम्प व्यवसायीको कालोबजारी, यी हुन् ठुलो परिमाणमा पेट्रोल लुकाउने पम्प व्यवसायी
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताले ढुवानी ठप्प पार्दा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । पेट्रोल पम्पहरुमा लामो लाइन छ भने, ढुवानी ठप्प रहेको छ । सरकारले..
मन्त्रीको चर्चा मोह : चर्चामा आउने यस्तो छ कृषि राज्यमन्त्री चौधरीको रणनीति
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वको मुखैमा बजार अनुमगनलाई तिब्रता दिएको छ । बजारमा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा ठगी तथा अनियमितता रहेका गुनासा आउन थालेपछि सरकारले शुक्रबार केही पशु ब..